पिडित छोरीको बयान : ११ वर्षको हुँदा देखि नै मलाई बुबाले ढो,का थु,ने,र प,ट,क,प,ट,क…. – Dainik Sangalo
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन ११, २०७८ समय: १२:१७:१८
एउटा छोरीले आफ्नै बुवाको बारेमा यस्तो आ,रो,प कसरी लगाउन सक्छ होला ? एउटा किशोरीले भने आफ्ना बुवालाई त्यस्तै आ,रो,प लगाएकी छन् । आफ्नै बुवाले क,र,णी गरेको र कसैलाई सुनाए धम्की दिएको भन्दै एक किशोरीले युट्युवमा सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले आफु ११ वर्षको हुँदा नै बुवाले त्यस्तो गरेको भएपनि केही भन्न नसकेको बताइन् । सानी छंदा बुवाले जे गर्नु भयो त्यो के हो भन्ने आफुलाई थाहा नभएको बताइन् ।
तर अहिले आफु ठूली भएपछि पनि गएको माघ २० गते पनि बुवाले आफुलाई क,र,णी गरेको किशोरीको भनाई छ । माघ २० गतेको घटना पछि बुवाले कसैलाई भनिस् भने तँलाई कसैले विवाह गर्दैन, तेरो कुरा कसैले विश्वास पनि गर्दैन तँलाई नै प्रहरीले लैजान्छ भनेर चेतावनी दिएको उनको भनाई छ ।
म आमासंग थिए बुवाले मलाई बोलाउनु भयो म जान ड’राए’की थिए । तर तँ संग काम छ भनेर बोलाउनु भयो अनि मलाई लगेर स्टोर लिएर जानुभयो । अनि कोठाको ढोका लगाएर मलाई क,र,णी गर्नुभयो । कसैलाई भनिस् भने तेरै बेइज्जत हुन्छ ।
Last Updated on: September 27th, 2021 at 12:17 pm